Bit By Bit - မေးမေးခွန်းတွေကို - 3.2 လေ့လာ vs. မေး
ကျွန်ုပ်တို့၏အပြုအမူ၏ပိုပိုပြီးအစိုးရနှင့်စီးပွားရေးစီမံခန့်ခွဲဒေတာအတွက်ရိုက်ကူးကြောင်းပေးထား, လူတချို့မေးခွန်းတွေမေးအတိတ်ကအရာဖြစ်၏ထင်ပေလိမ့်မည်။ သို့သော်၎င်း၏ရိုးရှင်းတဲ့မဟုတ်။ ဒါဟာငါအခန်း2မှာဆွေးနွေးထားတဲ့အတိုင်းသုတေသီများတိကျမှန်ကန်မှု, ပြည့်စုံနှင့်များစွာသောကြီးမားသောဒေတာသတင်းရပ်ကွက်၏အသုံးပြုနိုင်စွမ်းနှင့်အတူစစ်မှန်သောပြဿနာတွေရှိပါတယ်, အနာဂတျတှငျအမူအကျင့်နှင့် ပတ်သက်. လျော့နည်းမေးမြန်းပေမယ်လိမ့်မည်ဟုဆက်ဆက်မှန်သည်။ ထိုကွောငျ့, အဲဒီဒေတာသတင်းရပ်ကွက်များနှင့်အတူပြဿနာများသုတေသီများနောင်အနာဂတ်အဘို့မိမိတို့အပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ဖြေဆိုသူကိုမေးဆက်လက်လိမ့်မည်ဟုဆိုလိုကြောင်းမျှော်လင့်ကြသည်။
အပြုအမူဒေတာ-ပင်စုံလင်သောအမူအကျင့်ကန့်သတ်အချက်အလက်သည်ဤလက်တွေ့ကျတဲ့အကြောင်းပြချက်အပြင်, မေးမြန်းဖို့ကပိုပြီးအခြေခံကျအကြောင်းပြချက်လည်းရှိသေး၏။ အရေးအပါဆုံးလူမှုရေးရလဒ်များနှင့်ခန့်မှန်းတချို့ကဒီလိုစိတ်ခံစားမှု, အသိပညာ, မျှော်လင့်ချက်များနှင့်ထင်မြင်ယူဆချက်များကိုအဖြစ်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များဖြစ်ကြသည်။ ပြည်တွင်းပြည်နယ်များမှသာလူရဲ့ဦးခေါင်းအတွင်း၌တည်ရှိခြင်း, တခါတရံတွင်ပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမေးမြန်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်၏လက်တွေ့နှင့်အခြေခံန့်အသတ်နှင့်မည်ကဲ့သို့သူတို့စစ်တမ်းများနှင့်အတူကျော်လွှားနိုင်ပြီး Moira Burke ကနဲ့ Robert Kraut ရဲ့အားဖြင့်သရုပ်ဖော်ကြသည် (2014) မိတ်၏ခွန်အားကို Facebook ပေါ်မှာအပြန်အလှန်အားဖြင့်ထိခိုက်ခဲ့ပုံကိုအပေါ်သုတေသနပြု။ သူမအစဉ်အဆက်ကဖန်တီးသောလူ့အပြုအမူများဆုံးဧရာမနှင့်အသေးစိတ်မှတ်တမ်းများတပြီးပြည့်စုံလက်လှမ်းခဲ့ထို့ကြောင့်ထိုအချိန်က Burke က Facebook ကမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ပင်နေဆဲ, Burke ကနှင့် Kraut သူတို့ရဲ့သုတေသနလုပ်ငန်းမေးခွန်းကိုဖြေနိုင်ဖို့အတွက်စစ်တမ်းများကိုသုံးခဲ့ရတယ်။ အကျိုးစီးပွား-မည်သို့သူတို့ရဲ့ရလဒ်အဖြေကိုပိတ်ဖို့ကိုသာတုံ့ပြန်၏ခေါငျးအတှငျးရှိကွောငျးတခုပြည်တွင်းရေးပြည်နယ်တိကျတဲ့-ဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေများခံစားရ၏။ ထို့ပြင်အကျိုးစီးပွားသူတို့ရဲ့ရလဒ်စုဆောင်းရန်စစ်တမ်းတစ်ခုသုံးပြီးအပြင်, Burke ကနှင့် Kraut လည်းအခြားအလားအလာဖွငျ့အချက်များနှင့် ပတ်သက်. လေ့လာသင်ယူရန်စစ်တမ်းတစ်ခုကိုသုံးရန်ခဲ့ရသည်။ အထူးသဖြင့်သူတို့ကအခြားလမ်းကြောင်းများမှတဆင့်ဆက်သွယ်ရေး (ဥပမာ, အီးမေးလ်, ဖုန်း, မကျြနှာကိုမှမျက်နှာ) မှ Facebook ပေါ်မှာဆက်သွယ်များ၏သက်ရောက်မှုကိုခွဲခြားရန်ချင်တယ်။ အီးမေးလ်နှင့်ဖုန်းကိုတဆင့် interaction ကအလိုအလျှောက်မှတ်တမ်းတင်ထားသည်တောင်မှအဲဒီခြေရာတွေ Burke ကနှင့် Kraut မှမရရှိနိုင်ဘူး။ ချစ်ကြည်ရေးတန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့် Facebook က log ကိုဒေတာနှင့်အတူ Non-Facebook ကအပြန်အလှန်အကြောင်းကိုသူတို့ရဲ့စစ်တမ်းဒေတာပေါင်းစပ်ပြီး, Burke ကနှင့် Kraut Facebook ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်ရေးရငျးနှီးမှု၏တိုးမြှင့်ခံစားခကျြကိုမှတကယ်တော့ခဲပြုနိဂုံးချုပ်ထားပါတယ်။
Burke ကနှင့် Kraut ၏လုပျငနျးသရုပ်ဖော်အဖြစ်, ကြီးမားတဲ့ data တွေကိုသတင်းရပ်ကွက်များကလူမေးခွန်းများမေးရန်လိုအပ်ကြောင်းဖယ်ရှားပစ်မည်မဟုတ်။ တကယ်တော့ငါကဒီလေ့လာမှုကနေဆန့်ကျင်ဘက်သငျခနျးစာကိုဆွဲလိမ့်မယ်: ငါဒီအခန်းတစ်လျှောက်လုံးကိုပြသပါလိမ့်မယ်အဖြစ်ကြီးမားသော data ကိုအမှန်တကယ်, မေးခွန်းတွေမေး၏တန်ဖိုးတိုးပွားစေပါသည်။ ထိုကွောငျ့, တောင်းနှင့်စောင့်ကြည့်အကြားဆက်ဆံရေးကိုစဉ်းစားရန်အကောင်းဆုံးလမ်းကိုသူတို့ဖြည့်မယ့်အစားအစားထိုးဖြစ်ကြောင်းဖြစ်၏ သူတို့မြေပဲထောပတ်နှင့်ဂျယ်လီကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ပိုပြီးမြေပဲထောပတ်လည်းမရှိတဲ့အခါလူတွေကပိုပြီးဂျယ်လီလိုခငျြ; ပိုပြီးကြီးမားတဲ့ data တွေကိုလည်းမရှိသောအခါ, လူတွေပိုပြီးစစ်တမ်းများချင်တယ်။